IBucketwheel Dredge ithengiswe eBrazil Imayini Yegolide - I-Ellicott Dredges
I-Ellicott® Ithengisa I-Bucketwheel Dredge iye emayini yegolide yaseBrazil
Ellicott® I-International ithengise ngebhakede lebhizinisi enkampanini yaseBrazil ukuthola izimayini zegolide e-Amazon.
I-Mineracao Trans Amazonica (MTA) abeke i-Ellicott® I-Brand B890 "Wheel-Dragon ™" dredge in service near the Paru River entshonalanga yeJari eduze naseMonte Dorado, eBrazil.
I-MTA iyinhlangano esebenzisana neNorth Brazilian Mining Corp., Ltd. yeHong Kong neRio de Janeiro. Lokhu kufakwa kumake isicelo sokuqala se-Ellicott® uphawu lommbili wesondo elihamba phambili kumayini yegolide.
Uhlaka lwaphakanyiswa ngomshini wendiza yaseAmazon lwaya endaweni eyihlathi endizeni yeHercules. AbakwaMTA bakhulume ngokufanelekile kwe-B890 dredge ephathekayo yamalungiselelo emithwalo eguquguqukayo njengesinye sezizathu zokukhetha i-Ellicott® I-International.
Imininingwane ye-Ellicott® IBrand B890 “Wheel-Dragon ™ ifaka i-torque ephezulu idonsa ngamasondo amabili i-DWE94 excavator (150hp), injini enkulu yeCaterpillar 3412 kanye ne-injini engu-3306 esizayo. I-dredge ingamba ifike ezinyaweni ze-26 izinyawo bese iphampa ifinyelela ku-40,000 feet yamapayipi isebenzisa i-14-inch, 665 hp Ellicott® uphawu lomkhiqizo.
Lokhu kwakuyi-Ellicott yesibili® i-brand dredge ethunyelwe ngomoya eLatin American. Icala langaphambilini bekungukulethwa komoya kwe-Occidental Petroleum kwe-Series 1870 dredge emkhakheni kawoyela waseCano Limon eColombia.
I-Ellicott® Umugqa womkhiqizo we “Wheel-Dragon ™” usukela ku-30 ​​hp kuye ku-1500 hp futhi ungasebenza ngezinhlelo zokumpompa kusuka kumasentimitha ama-4 kuye kumasentimitha angama-40. Isifaki samabhakede enkampani kanye nezicucu zayo ze- “Wheel-Dragon ™” ziphumelela ikakhulukazi embonini yezimayini.